Challenge The Good News Paper - Isidakwa sinikezwa ithuba lesibili (Zulu)
Isidakwa sinikezwa ithuba lesibili (Zulu)
Umuntu othanda utshwala enodlame, uDuncan Oundo wayecabanga ukuthi ufanelwe yisihogo
Utshwala kwakuyinto ebalulekile empilweni ka Duncan Oundo futhi ukuzinikela kwakhe etshwaleni kwazwisa abaningi ubublungu kwaze kwafika lapho ethatha ithuba lesibili anikwezwa lona.
''Ngesikhathi ngishada, ngineminyaka engu 24, ngase ngizinikele etshwaleni,'' uDuncan uyavuma.
''Unkosikazi wami wayenomzwangedwa ezizwa ehlala ekhathele ngoba ngangi ngekho ekhaya ngangihlala ngingaphandle ngiphuza ngimshiya nomsebenzi nezidingo zasekhaya.''
Wonke umndeni ka Dunca wawucabanga ukuthi ulandela ezinyathelweni zikababa wakhe futhi babemshayela izandla ngokuthi aphuze utshwala ngokweqile.
''Ubaba wami wayenginika imali yokuthenga utshwala kepha wayenga mniki unkosikazi wami imali yokuthenga ukudla noma amsize ngandlela thile,'' uyakhumbula.
Ngokuhamba kwesikhathi inkinga kaDuncan yotshwala yakhula kanti futhi nendlela yakhe yokuziphatha enodlame kwaku kubi kakhulu ngoba abantu babe ngasamhloniphi.
''Ngamkhulela emndenini okholwayo,'' usho kanjalo, ngazi kahle ukuthi uNkulunkulu ufunani kimi. Ngesikhathi impilo yami ngiyinikela etshwaleni sengingu muntu onodlame, ngalahlekelwa ithemba ngoba bengibona ukuthi ngiyisoni esibi kakhulu.
''Ngangicabanga ukuthi engikwenzayo ngeke ngize ngithethelelwe. Ngangilindele ukufa ngithole isigwebo sami esihogweni.''
Ngolunye usuku uDuncan esendaweni yokuqeda ukoma wezwa omunye umuntu efunda iBhayibheli.
''Kwaku ngenye indoda eyayishumayela ngaphandle wayeshumayela ngencwadi ka Isaya 1, kusuka kuvesi 18-20,'' uDuncan uyakhumbula.
''Lamavesi akhuluma ngoNkulunkulu owenza izono zethu zibe mhlophe njengeqhwa '-kungabukeki sengathi ngike ngazenza izono-uma siza kuye sifulathele izindlela zethu ezimbi.''
Lamazwi amthinta uDuncan kanga ngokuthi akazange ayeke ukucabanga ngawo.
''Ngobunye ubusuku ngazithola ngise simweni esibi ngashaya unkosikazi wami ngacishe ngambulala,'' uyavuma ngokukhulu ukuzisola.
''Iphutha lakhe wephuza ukungivulela umnyango. Uma umphakathi walapho ngihlala khona uzwa ukuthi ngenzeni, amadoda akhona angesabisa ngokuthi uma unkosikazi wami engafa nami bazongibulala.''
Ethukile ngenxa yesimo senkosikazi yakhe nangempilo yakhe esengozini, uDuncan wakhumbula amavesi awezwa eBhayibhelini waphendukela kuNkulunkulu ngomkhuleko.
''Ngakhuleka, 'Nkosi, uma ungasindisa unkosikazi wami ngizonikela ngempilo yami yonke kuwe ngiku khonze zonke izinsuku zokuphila kwami'.
UNkulunkulu wawuphendula umkhuleko wami unkosikazi wami waphaphama, wangisindisa olakeni labantu ababefuna ukungi bulala. Kungaso sona lesosikhathi lapho ngabona khona ukuthi uNkulunkulu ungumngani wami noma mina ngiyisoni.''
Ngabo lobobusuku uDuncan waya emzini kamfundisi wangqongqotha emnyango.
''Ngamtshela ukuthi sengikhathele yizinto zomhlaba ngasho ukuthi ngidinga uJesu Kristu,'' uyakhumbula.
''Umfundisi wayecabanga ukuthi ngidakiwe wangitshela ukuthi ngibuye ekuseni. Ngala wagcina engihola 'ngomkhuleko wezoni' emva kwalokho ngezwa kusuka umthwala osindayo enhliziyweni yami, ukuthula kukaNkulunkulu kwathatha indawo.''
UDuncan nsuku uphila njengomlandeli kaJesu Kristu futhi ungumfundisi webandla elisakhula.
Ngesikhathi eyeka utshwala nokulwa unkosikazi wakhe wamangazwa ushintsho alibona empilweni yakhe okwamholela ukuthi naye agcine engumKrestu.
''Abafowethu kabazange basithokozele isinqumo sami,'' usho kanjalo, ''noma bangixosha endlini yami ngenxa yokufulathela 'izinkolelo' zabo basishiye singenalutho, ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzohlangabezana nezidingo zethu.''•
<< Drunkard given second chance
’n DRONKAARD KRY ’n TWEEDE KANS (Afrikaans) >>